परिवर्तनको अनुभूति गराउछु – सापकोटा
By vijayafm on	 June 14, 2017 अन्तरवार्ता, फोटो फिचर, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
“केबलकारको स्टेसन गैँडाकोटमै बन्छ”
अठ्चालीस वर्षयता गैँडाकोटलाई कर्मभूमि बनाई विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा निरन्तर लागेका गैँडाकोट १ का हरिप्रसाद सापकोटा, नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ (पहिलो चरण) बाट गैँडाकोट १ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुपूर्व उहाँले धेरै प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । राजनीतिक जीवनको यात्रा सामाजिक कर्मको देन हो भन्ने सापकोटाले पाँचवर्षको अवधिमा गैँडाकोटमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिने बताउनुभएको छ । सापकोटाको सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन र गैँडाकोट १ को विकासका लागि उनको भावी योजनाका विषयमा गरेका छौँ । प्रस्तुत छ सम्पादक श्रीधर उपाध्यायले गर्नुभएको कुराकानी ।
अहिले व्यस्तता के काममा छ ?
निर्वाचित भइसकेपछि विभिन्न वडामा नगरप्रमुख नगरउपप्रमुखसहित सम्मानका कार्यक्रम भइरहेका छन् । यसैमा अलि बढी समय खर्च भइरहेको छ ।
जेष्ठ १ गते गैँडाकोट नगरपालिकाको वाड नं. १ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो, कस्तो महसुस गर्नुभएको थियो ?
घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा असाध्यै राम्रो रेस्पोन्स गर्नुपर्यो, उहाँहरुका आवश्यकता, आग्रह र चाहनाले जिम्मेवारीबोध गराएको छ । हिजोका दिनमा पनि सामाजिक काममा हिँडियो, अहिले स्थानीय तहको संरचना परिवर्तन भएको छ । यो पाँच वर्षमा जनताको चाहना रहेको छ परिवर्तनका लागि । जिम्मेवारीवोध बढेको अनुभूति गरेको छु ।
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आइपुगेको छ, वडासमेत अधिकारहरुले प्र्रत्याभूत छ, स्थानीय तहको मन्त्री तहको हैसियत राख्छ वडा अध्यक्षले, स्थानीय सरकारको मन्त्री भएँ भन्ने अनुभूति भयो कि भएन ?
जिम्मेवारीबोध भएको छ । वडाले धेरै अधिकार पाएको छ । जनताले धेरै अधिकार पाएका छन् । उनीहरुको अधिकार उनीहरुकै पोल्टामा पार्न उनीहरुको सेवा गर्ने अवसर पाएको छु । यसर्थ पनि मन्त्री भन्नुभयो । यसको अलि अलि अनुभूति भएको छ ।
सामाजिक काममा कसरी सुरुवात भयो ?
२०२६ सालमा गैँडाकोटमा आएको हुँ । जंगल धेरै थियो । नारायणी पुल थिएन । नारायणगढ जाँदा डुङ्गा तरेर जानुपर्दथ्यो । बाटोघाटो थिएन । २०३७ सालदेखि मौलाकालिका मन्दिरको काममा सहभागी भएँ । सोही समयमा विजय विकास स्रोत केन्द्रमा संलग्न भएर काम गर्न थालेँ । अग्रज व्यक्तित्व तिलकप्रसाद सापकोटा दाजुसँग भेटघाट भयो । मौलाकालिका मन्दिरबाटै मेरो सामाजिक कामको सुरुवात भएको थियो । सामाजिक काममा अन्य पार्टीहरुसँगको सहकार्यबाट काम गर्दै आएको छु ।
सामाजिक कामले के सिकायो ?
सामाजिक कामले आज मेरो उचाइ बढाएको छ । मैले सामाजिक कामको थालनी गरेको मौलाकालिका मन्दिरमै ४० वर्ष निरन्तर खटिएको छु । दुर्गा भवानीको आशीर्वाद मिलेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा मौलाकालिकाको समितिमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरेँ । उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्दै मौलाकालिका मन्दिरलाई पर्यटकीय सूचीमा पुर्याउन सफल भयौँ । गैँडाकोट १ को श्री नेपाल राष्ट्रिय शमशेर आदर्श मावि, महेन्द्र निमावि, नवदुर्गा विद्यालयको स्तरीकरण र गुणस्तरीयताका लागि काम गरैँ । शिक्षाको विकासले समाजको विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने कुरा पनि मलाई सामाजिक कामले सिकाएको छ ।
पहिलेको गैँडाकोट र अहिलेको गैँडाकोटमा के फरक पाउनुभएको छ ?
एउटा उखानै थियो “खाउ त मकै नखाउ त मकै” । अहिलेको राजमार्गमा सानो बाटो थियो । डुङ्गा तरेर नारायणगढ जानुपर्ने बाध्यता थियो । बजार गर्न गएको बाउ आउँछ कि आउँदैन डर थियो । असार १ गतेबाट बजारभाउ दुई गुणा बढ्थ्यो त्यतिबेला पनि । अहिले समयक्रमसँगै र गैँडाकोटका अग्रजको नेतृत्वमा धेरै विकास भएको छ । पहाडी भेगबाट झरेका अग्रजहरुको साथ र सहयोगले गैँडाकोटमा अहिले धेरै विकास भएको छ । अहिले सहकारी गाउँ भएको छ । देशकै केन्द्रव्रिन्दु भएको छ । अझै पनि धेरै सम्भावना बोकेको छ । धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको छ । यसले पनि यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावना बोकेको छ । सम्भावना परिपूर्तिका लागि योजनागत रुपमा अघि बढ्नु अब स्थानीय तहको सरकारको भूमिका रहन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि धेरै समयपछि आउँदा सम्भावना पनि छ । उत्तिकै जनताको आशा पनि बढी रहेको छ ।
यहाँले राजनीतिक जीवन कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो ?
मेरो राजनीतिक जीवनयात्रा “देउताको पार्टी”बाट सुरु भयो । त्यति बेला नेपाली काँग्रेसलाई देउताको पार्टीको संज्ञा दिने चलन थियो । मेरा अग्रज साथीभाइ सबै नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध भएर सामाजिक विकासको पाटोमा हिँडेका थिए । मैले पनि अलि अलि बुझेँ अनि काँग्रेसबाट मैले राजनीतिक जीवनको सुरुवात गरेको हुँ । मेरो राजनीतिक यात्रा पनि सामाजिक यात्रा सँगसँगै सुरु भएको थियो । मैले ३७ वर्ष गाउँ कमिटिमा बसेर काम गरेँ, नगर समितिमा पनि बसेर काम गरेको छु । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा पनि सबै दलहरुको तर्फबाट आर्थिक समितिमा बसेर काम गरियो । जनअन्दोलनमा घाइतेहरुलाई सहयोग गर्ने काममा तल्लीन भएर काम गरियो । सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेको हुनाले समाजको मर्मलाई बुझ्ने गरेको छु । जनआन्दोलनमा खटेर काम गरियो । सामाजिक क्षेत्रमा बढी चासो रहने गर्दथ्यो । गैँडाकोटको मौलाकालिका सामुदायिक वन भएको डाँडा रातो नाङ्गो भइसकेको थियो । यसलाई हरियाली बनाउन सबै कम्मर कसेर लाग्यौँ । मेरो राजनीतिक जीवन सामाजिक पाटोले डोराएको हो ।
राजनीतिमा आएर के पाएँ के गुमाएँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
सामाजिक काम त गर्दै आएको थिएँ । राजनीतिक पाटोले धेरै सहयोग मिल्ने देखेर राजनीतिमा आए । बिपिको कामलाई सपनालाई साकार पार्ने इच्छाले यहाँसम्म आएँ । अझै धेरै गर्नसमेत बाँकी रहेको छ । राजनीतिक जीवनमा आएर सामाजिक पाटो पनि झन् दरिलो भएको छ । निकै खुसी छु । गुमाउनभन्दा पनि धेरै कुरा पाएको छु, सिक्ने अवसर पाएको छु ।
गैँडाकोट वाड नं. १ को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । समस्याहरुका विषयमा राम्रोसँग जानकार पनि हुनुहुन्छ होला ? वाड नं. १ मा अहिले तात्कालिक समस्या के छन् ?
तात्कालिक समस्या यतायात, विद्युत् र स्वास्थ्य नै प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।
यिनको समस्या समाधान कसरी होला ?
हो राम्रो कुरा गर्नुभयो । अहिले भर्खरै नगरबस चलेको छ । यो बसलाई गैँडाकोट १ को बृटिसक्याम्प, बाघखोर हुँदै शिलान्यास झर्ने व्यवस्था मिलाउनैपर्ने देखिन्छ । अनि अर्को बाघखोरदेखि इटाभट्टा, कालीगण्डकी करीडोर हुँदै हाइवे निस्कने गरी यातायातको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समस्या छ । यसको काम सुरु भएको छ, मन्दिर टोलबाट सुरु भएको छ । यो अघि बढ्ने आशा लिएको छु । पाँचवर्षभित्रै धेरै मात्रामा सडकको सुधार हुने विश्वास दिलाउँछु तपाईंलाई । विद्युत्, बिजुली पोलको व्यवस्थितीकरण गर्नु आवश्यक छ । यतिमात्र होइन मौलाकालिकाको फेदीमा सुरक्षाका लागि एउटा अस्थायी प्रकृतिको भए पनि प्रहरी चौकी स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बृटिसक्याम्प हुँदै हर्दीकेलादी जाने बाटामा देवघाट क्षेत्रविकास समितिलाई ५० लाख बजेट आएको भन्ने खबर केही समयअघि बाहिर आएको थियो । यसको कुरा चाहिँ के छ ?
तँपाईंको कुरा ठीक हो , बजेट सरकारले छुट्याएको हो । प्रक्रिया मिलाउँदा अलि ढिलो गरी काम सुरु हुने अनुमान गरेको छु । म संस्थापक भएरै सुरु गरेको बाटो हो । देवघाट क्षेत्रविकास समितिअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट सर्भे भइसकेको छ ।
दीर्घकालीन समस्याचाहिँ के के हुन् ?
खानेपानीको समस्या, भवननिर्माण, फोहोरमैला दीर्घकालीन समस्याका रुपमा आउन सक्छन् । अहिले त्यति समस्या छैन । पहिले खानेपानीको समस्या थियो, अहिले जनघनत्व बढ्दै छ, यसकारण पनि गैँडाकोटमा रहेका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलुके खानेपानीको सुदृढीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । फोहोरमैलाको समस्या अहिले देखिएको छैन, यसलाई नीतिगत र व्यवस्थागत रुपमा अघि बढ्न सकिएन भने यो दीर्घकालीन समस्या बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
गैँडाकोट १ को विकासका लागि तँपाईसँग केकस्ता योजनाहरु रहेका छन् ?
मैले निर्वाचनमा जानुपूर्व यसअघि नै केही प्रतिबद्धताहरू जनाइसकेको छु । गैँडाकोट १ मा हाटबजारको निर्माण, प्राविधिक शिक्षालयको विकास, मौलाकालिका फेदीदेखि मौलाकालिका देवघाटसम्म केबलकार सञ्चालन हुँदै गर्दा वडावासीको हित, सुशासन, धार्मिक पर्यटन, शैक्षिक विकास, सुकुम्बासी समस्या समाधान लगायतका धेरै योजनाहरुलाई मैले पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।
फेदीमा केबलकारका लागि जग्गा किनिएको भन्ने प्रचार गरिएको छ, खेत घडेरीको भाउ बढाउने हतकन्डा अपनाइएको छ, केबलकारको निर्माणको कामका बारेमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
म मौलकालिका मन्दिरको सदस्य पनि हुँ । यस विषयमा केही जानकार पनि छु । मौलाकालिका मन्दिरमा पुग्ने केवुलकारका लागि ग्लोबल आइएमईका निर्देशक चन्द्र ढकाललाई ५१ प्रतिशत, मन्दिरलाई ४९ प्रतिशत हुने गरी काम भएको हो । यसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न समुदायसँग बसेर फेरी छलफल पनि हुनेछ । जग्गाको विषयमा आधिकारिक कुरो मलाई थाहा भएन । तर प्राविधिक रुपमा अध्ययन हुनेछ । स्टेसन गैँडाकोटमै रहने छ । फेदीकै नेराफेरीमा नै स्टेसन रहन्छ । यसका लागि हामी पनि पहल थाल्छौँ ।
शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि वडामा के सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
गैँडाकोट १ मा केही निजी र सरकारी २ विद्यालय संचालनमा छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा संचालन गर्न सहयोग गर्ने अथवा समन्वय र सहयोग गर्न वडा कार्यालयको भूमिकालाई बढाउने छौँ । नेराशमावि जिल्लाबाट पुरस्कृत भएको छ । अंग्रेजी माध्यम सुरु भएको छ । धेरै सुधार भएको छ । नवदुर्गामा पनि शिक्षण तथा भौतिक सुधारको आवश्यकता देखेको छु । शिक्षाको विकासको सम्भावना देखेको छु । यसका लागि काम गर्ने छु । शिक्षा क्षेत्रका मात्रै होइन केही सामाजिक संस्था आदर्श विकास समाज नेपाल, मौलाकालिका समाज केन्द्र , राइजिङ स्टार क्लब, सामुदायिक वन, महिला समूहहरुसँगको सक्रियतामा काम गर्ने हो । सबै क्षेत्रमा परिवर्तन गराउन सक्छौँ जस्तो लागेको छ ।
वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको एक महिना हुने बेला भइसक्यो । वडा कार्यालय छैन, यसले कत्तिको समस्या हुने गरेको छ ?
माथिको कार्यतालिका आएको छैन । साबिक गैँडाकोटका ९ वार्डको काम नगरबाटै हुने छ तत्कालका लागि । भोलिका दिनमा अवश्य काम हुनेछ । अहिले वडावासीका धेरै जिज्ञासा पनि छन् । सिंहदरबारको अधिकार वडामा आउन कति समय लाग्छ भनेर धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ । आशाअनुरुपको काम हुन समय लाग्ला । तर छिट्टै वडा कार्यालयको स्थापना हुनेछ । वडाको काम सहज हुनेछ ।
वडावासीले केकस्ता कामका लागि तपाइँसग भेट गर्नसक्छन् ?
अहिले चाहिँ जग्गाको सिफारिस, घर, नाताप्रमाणित यस्ता कुराका लागि मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ । यी बाहेक पनि अन्य काम छन् जस्तै बहाल करको लेखाजोखा सिफारिसका लागि, मोही लागत कट्टा सिफारिसका लागि, जन्ममिति प्रमाणितका लागि, मिलापत्र कागज गराउने, जग्गा धनीपूर्जा हराएको सिफारिस, उद्योग ठाउँसारी सिफारिस लगायतका ३७ विषयमा गरिने सिफारिसका लागि मलाई मात्र होइन सबै वडाका वडावासीले आफ्ना वडा अध्यक्षका लागि भेट्न सक्ने छन् । अहिले सिफारिस गर्न सही गर्न सुरु भएको छैन । सहजीकरणका लागि भरपुर काम गर्न सक्छु । तत्काल वडा कार्यालयका लागि अहिले गैँडाकोट १ को मिलनचोकमा तीन कोठाको भवन छ । त्यहाँबाट काम सुरु गर्ने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ ।
वडाको विकासका लागि अन्त्यमा के कस्ता प्रतिबद्धता गर्न चाहनुहुन्छ ?
मैले चुनावमा जानुअघि गरेका प्रतिबद्धताहरु, छलफलबाट अब निस्कने नयाँ योजना, तत्कालीन समस्या र दीर्घकालीन योजनाका सन्दर्भमा प्राविधिकसँगको छलफल अघि बढाउने काममा प्रतिबद्धता जनाउँछु । यो मात्र होइन स्थानीय तहअन्तर्गत वडाका वडा अध्यक्षले गर्ने विद्युत् चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण, हाटबजारको व्यवस्थापन गर्ने गराउने लगायतका कार्यका लागि पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
हवस् त, धन्यवाद, समय र विचारका लागि ।
हवस् त, सामाजिक रुपान्तरण, समाजको पहरेदारी, सुशासनका लागि घच्घचाउँदै आइरहेको विजय खबर पत्रिका, विजय एफएमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई विश्वास गरी नेतृत्व दिनुभएको छ । सम्पूर्ण वडावासीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ ।